Wasiir ku geeriyooday Garoowe iyo Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir ku geeriyooday Garoowe iyo Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay
Magaalada Garoowe ee Caasimadda Maamulka Puntland ayaa waxaa xalay ku geeriyooday Wasiirkii hore ee Amniga maamulkaas, Axmed Cabdullaahi Yuusuf Dowlad ,waxaana ka tacsiyeeyay Mas’uuliyiin kala duwan.
Madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni ayaa Bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer Puntland uga tacsiyeeyay Geerida Wasiirkii amniga Puntland,isaga oo Eebbe uga baryay in uu Janadii fardowso ka waraabiyo.
“Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni oo ku hadlaaya magaciisa, kan shacabka Puntland iyo kan Dowladdaba waxa uu ka tacsiyaynayaa geerida Alle naxariistii Janno haka waraabiyee Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Puntland AXMED Cabdullaahi Yuusuf (Dowlad)” ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Madaxweynaha Puntland Siciid C/llaahi Deni ayaa dhanka kalana waxaa uu sheegay in shaqooyin muhiim ah Wasiirku uu la soo qabtay umadda reer Puntland islamarkaana abaal weyn ay uaga hayaan Bulshada.
Maamulka G/Banaadir oo Amar kusoo rogay Hay’addo ka Howlgala Muqdisho
Waddo muhiim ah oo xaalad halis dateed u go’day (Halkee ku taalla wadada?)